Fikir, Conel, Paris (2021)
Wax kastoo aan Soo qorno/gudbino, waxaanu Beegsannaa inaanu la tartano xaqiiqada jirta. Waxaanu Hiigsanaa inaanu xalino dhibta xidhiidhka JACAYLKA ee bulshadeena, waxaanu soo gudbinaa qoraalo cajiiba oo la fahmi karo.
ma Jeceshahay inaad nagu soo biirto. life coach
"Caaqilku marka uu aamusanyahay wuu fikirayaa,
Markuu Hadlana wuu wardiyayaa. Markuu dhawrana/eegona wuu waano qaataa"
imaamu Cali binu Abi Daalib
ASC walal/abayo isku Soo noqod wanagsan,
Hadii aad Dambi samaysay milyan jeer, wali fursad baad haysataa aad ku towbad keento, Allah waa Dambi dhaaf badane Naxariis badan. Wuxuu ku siiyaayay fursado badan oo aadan ku riyoon karin xataa.wuxuu ilaahay sugayaa inuu kuu dambi dhaafo kuna hanuuniyo. Markaaa maxaad sugaysaa walal???
Naftayda iyo taadaba waxaan ku Waaninayaa Alle ka cabsi
Caawa maxaad jeceshahay inaan Falanqayno?
1. Xidhiidhka cusub sida loo samaysto
2. Doorashada lamaanahaaga.
3. Fahamka labada isjecel.
"Nin Rageedku waa Kuma?,
Waaka Siiyaa Jacaylkiisa Lacagta, Hadana ka Raali galiya Inta uu kala Raagay".
Qaar ka mid ah marmarsiinyaha iskaabulada:-
1. ''Qof wanaagsan oo la guursado ma jiro''
2. ''Sanadkan wax la aamino maleh''
3. ''Dadkii fiic-fiicnaa oo dhan reer ay leeyihiin''
4. ''Calafkeyga aan suganayaa''
5. ''Dookheyga wali ma helin''
6. ''Sanadka soo socda ayaan guursanaa''
7. ''Waxbarasho ayaa ii socoto''
8. ''Mashquul, shukaansiba tabar uma haayo''
9. ''Dhallinyarada maanta jirta waa wakhti lumis'
10. ''Guurkii hore ayaan ku degdegay''
FG. Lambarkee ayaad u xayiran tahay?
"Jacayl dhaba ma leedahay?♥♥💘
Ifka waxa la dhawraa
dadka laga dhawaystaa
dhakhtarkiisa noqon Kara
#mention qofaad jeceshahay
"Hadii lagu dhaho waxaad nolosha la wadaagaysaa qof cimrigiisu jiro 2da number ee mobile kaaga ugu dambeeya, imisuu noqonayaa numberkagu"?📱📱📱
Inaad qof jeclaataa beryahan dambe aad Bay u adagtahay, waayo waxaynu la dhaqmaynaa Qalbiyo 💔 jabay oo dad hore kusoo tunteen oo ay burburiyeen iyo kalsooni daro aynaan innagu abuurin.
waxaynu la noolnahay Jiil/kacaan dadkiisu burbursanyihiin kuwaasoo yaqaan sida qof loo jeclaanayo laakiin ka cabsanaya inay ruux jeclaadaan. qof kastoo aynu la kulanaa wuxuu wataa dhibaatadiisii Soo martay, waxaynu rabnaa inaynu raadino qofka saxda ah kaasoo si dhab ah kuu jecel oo kaa caawiya sidaad uga dawoobi lahayd dhaawacii hore.
#mention Soo dhe qofaad jeceshahay inuu Mar labaad wax jeclaado.
Habeenkaan Kula caweeyo
Culayska intaan iloobo
Si baan u farxaa cajiiba😄😄😄
#Share with your love.jacaylkaaga #mention dheh
Shinadu waxay raadisaa ubax💐💐💐
Si ay uga samayso malab macaan badan🍯🍯🍯
Annaguna waxaan raadinaa dad aad u fiican sidiina oo kale, si aan u waraabino Jacaylka iyo hadallo macaan🍬🍬🍬
Ma suurtagalaysaa inaad qof barto sida uu kuu jeclaanayo?💓💜💝
💋Hubaal waa fariin-jacayl qalbiga ka talaabysa💋
💗In aan ku iloobo aad ayay u adag tahay balse in aad i iloowdo adiga ayay ku taal, iska iloow SMS-kaan balse qofka soo diray ha iloowin waligaa.
💗Haddii 100 qof ay ku jecashahay waana ka mid ah ahay , haddii hal qof uu ku jecel yahayna kaasi aniga waaye aniga waaye aniga waaye
Xabiibi haddii aad tahay qofka labaad ee aan jeclahay , hadaba waa kee qofka koowaad ee aan ka jeclahay , jawaabtu wax ay tahay maba jirto , mar waliba adiga ayaa ii ah qofta koowaad ee aan jeclahay.
Haddii riyada la dlaban karo waxaan Alle ka dalban laha in aan adiga kugu riyoodoNaftaada waan kaa jeclahay
Waxa aad tahay tuug weyn, waayo wadnaheyga aad xaday
maba sifeyn laheyn arimahaani oo idil haduusan Jaceylkaada i qaadi laheyn
waan ku Jeclahay adigoo ii dhow waan ku Jeclahay adigoo iga fog,intaba adigaan ku jeclahay .
Habeen madawaan qol galay
Qaraamiyo qaaci shiday
Qasiido ammaana iyo
Qaxwaan ku cawaynayaa
Quraarad jabtaan la kabin
Quluubtuna waa sidaa
Jacaylku haduu qaldee
Qalbiga weedhaha dhayiyo
Mar qaalida hayga goyn
Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Fikir publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Envoyer un message à Fikir:
مهضوم تقبش أمك
💝Jacaylkaa badala dadka noloshooda💝❣️
Waxaan kaa raali gali-naynaa ka maqnaashaha aan hawada kaga maqnayn mudo, Naga raali noqo. Waxaan idiin balanqaadaynaa inaynan Mar dambe dhici doonin. Sorry saaxibayaal
jacaylku isfiirinmaahan ee waa kalsooni
Habeen wacan qaraabo jacayl
ha waaro jacaylku
Allow qeyrkaga nagutoosi
Adigu runta maa jaceshahay mise beenta